Sandals Foundation: Kuita Musiyano Mukuru muBahamas
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kutarisirwa » Sandals Foundation: Kuita Musiyano Mukuru muBahamas
Antigua & Barbuda Kuvhuna Nhau • Bahamas Kuputsa Nhau • Bharabhasi Kuputsa Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Caribbean • Curacao Kuputsa Nhau • Grenada Kupwanya Nhau • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Jamaica Kupwanya Nhau • nhau • Kutarisirwa • Mutsvene Lucia Breaking News • ushanyi • Kufamba Wire Nhau
Sandals Foundation yakazvipira kuchengetedza nharaunda, kuvaka nharaunda dzakasimba uye dzine hutano, uye kutsigira dzidzo mukati menzvimbo dzese uko kune Sandals uye Beaches Resorts zvivakwa. Kubva kuAntigua & Barbuda kuenda kuBarbados, kubva kuCuracao kuenda kuGrenada, kubva kuJamaica kuenda kuSaint Lucia, uye kuBahamas, Sandals inopfumisa upenyu hwevanhu vezvitsuwa izvi zveCaribbean.
For Sandals, tariro inokurudzira inopfuura uzivi; iko kudana kuita chiito. Izvo ndezvekushongedza vanhu muCaribbean nechivimbo, simba, uye kuzadzikiswa, uku uchipa nharaunda mhinduro dzakasimba dzematambudziko avanosangana nawo zuva rega rega. Nekudaro, iyo Nheyo inofemerwa zuva nezuva nekusimba kwevanhu, hunyanzvi hwavo, uye kushingirira kwavo kuwana hupenyu huri nani. Iwo mibairo isingaenzaniswi yeSandals Foundation yanga iri kufambira mberi uye kubudirira kwezvirongwa zvayo uye vanobatsirwa.
Hezvino izvo Sandals anga achiita muBahamas.
The Sandals Foundation yaita chitsidzo kunharaunda yose yeCaribbean kupindura nokukurumidza kune dzimwe nyika dzenjodzi dzinokonzerwa nenjodzi dzinongoitika dzoga. The Foundation lobbies rutsigiro kubva kune vaenzi vekutandarira, vanotengeserana navo, vamiriri vekufambisa, vatengesi, uye mamwe masangano kuunza ruyamuro kunharaunda dzakawirwa nenjodzi.
Bahamas yakakuvadzwa zvakanyanya mumakore apfuura nekuda kwemadutu. Muna 2015, Chikamu 4 Hurricane Joaquin yakawira paLong Island ichikonzera kukanganisa kukuru. The Sandals Foundation yakatanga mushandirapamwe wakakura wekambani yese munzvimbo dzese nedzimbahwe remakambani kubatsira nekuedza kudzoreredza zvitsuwa.
Mushure mezvo, Nheyo yakagadzirisa uye yakashongedza Cancer Society Scrub Hill Long Island, Long Island Resource Center, kuburikidza nekubatana neBazi reDzidzo neLadies Friendship Club yeLong Island.
Muna 2016, Hurricane Matthew yakarova zvitsuwa zveBahamas. The Sandals Foundation yakaunganidza mhinduro yekukurumidza kubatsira kukurumidza hurongwa hwekudzoreredza mashandiro ezvitsuwa. Musha wevakwegura wakawanwa muBains Town pamwe chete nokuparadzirwa kwejenareta, tende, zvokudya, uye mvura muGrand Bahama, Andros, uye Nassau.
Sandals Foundation yakabatana neBahamas National Trust yemushandirapamwe weConch Conservation sezvo kubata hove kwakakosha mutsika nehupfumi kuBahamas. Mushandirapamwe we "kuchengetedza" wakabatsira kusimudzira maitiro ekubata hove uye wakabudirira mukuwedzera ruzivo nezve indasitiri yeconch.
Terevhizheni neredhiyo maPSA akagadzirwa nechinangwa chekudzidzisa munharaunda dzekumaruwa uye matinji akaiswa mumaresitorendi echikafu nekukurumidza sechikamu chekuedza kutsvaga rutsigiro nekuwedzera ruzivo rwedanidziro nezvinangwa zvayo.
Kuchovha Kuti Uchengetedze Madhamu
Kuburikidza nedzidzo ine ruzivo, Sandals Foundation yakaunza vadzidzi vanopfuura zviuru zvitatu muBahamas parwendo rwekukwira chikepe kuenda kumangrove kuti vadzidzise kukosha kwenzvimbo dzemvura kune ecosystem. Makwikwi emaposta evadzidzi vari kutora chikamu akaitirwawo kuti vadzidzi vakwanise kuratidza zvavakadzidza kubva munzendo dzemumunda.
Kubva 2010, Chikoro cheGambier Primary, chine vagari ve105 vakomana nevasikana vari pakati pemakore matanhatu negumi nerimwe, chave chikoro chakagamuchirwa cheSandals Foundation. Iyo Nheyo yakashanda nesimba mukusimudzira kwevadzidzi, vashandi, uye zvivakwa zvechikoro mumakore apfuura zvinosanganisira kupa zvekushandisa zvechikoro, kudzidzisa uye kuverenga nekunyora kwevakomana, kuchenesa mazino evadzidzi, uye kuitirwa kwepagore kweKisimusi mapati uye toyi. kugovera.
Rokers Point Primary School chave chiri chikoro chakagamuchirwa cheSandals Foundation kubvira 2011. Nheyo yanga iri chikamu chakakosha chebudiriro yechikoro kuona kufambira mberi kwevadzidzi muhurongwa hwedzidzo uye nzanga yakakura. Chimwe chezvirongwa zvikuru zvakaitwa neSangano paRoker's Point Primary kwaiva kugadzirisa uye kugadzirwa kwerabhoritari yemakombiyuta kuitira kubatsira vadzidzi zana nemakumi mana.
The Sandals Foundations isangano risingabatsiri iro rakatangwa muna Kurume 2009 kubatsira Sandals Resorts International kuti irambe ichiita mutsauko muhupenyu hwevanhu uko kune zvivakwa zveSandles.